Is -qarinta bidaarta - Talooyinka ugu fiican ee wax ku oolka ah | Bezzia
Susana godoy | 10/10/2021 20:00 | Quruxda
Timaha oo daata ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ay dad badani la kulmaan. Taasi waa sababta ay u badan yihiin ikhtiyaarrada ay tahay inaan awoodno u qari bidaarta hab wax ku ool ah iyo in ay muujineyso wax yar ka yar. Inaan mar kale is aragno timo mar walba waa wax kor u qaadaya isku-kalsoonaanta maantana waan gaari doonnaa.
In kastoo alopecia ayaa ku badan iyaga marka loo eego iyaga dhexdooda, Waa run in ay jiri karaan sababo kala duwan sababta aan u wajahayno. Sidaa darteed, waxaa had iyo jeer wanaagsan in lagu qabsado xalalkii horeba gacanta ugu jiray. Ma rabtaa inaad ogaato waxay ku saabsan tahay?
1 Qari bidaarta: Timo -jar cusub
2 Microfibers kabka
4 Laynka yaryar
5 Qurxinta timaha
Qari bidaarta: Timo -jar cusub
In kasta oo ay u muuqato wax iska hor imanaya, haddana sidaas maaha Sababtoo ah haddii aan ka hadalno timo lumis, waa run in aysan had iyo jeer ka dhicin dhammaan meelaha si siman. Tani waxay keenaysaa meelaha laga soo galo inay xoogaa hoos u sii dhaadhacaan ama laga yaabee inay madaxa sare ama 'taaj'. Sidaa darteed, ma jiro wax la mid ah isku dayga inaad timo cusub oo timo goyn leh aad u sii badan tahay. Goynta leh mugga, oo leh lakabyo iyo baangado markasta oo ay suurtogal tahay, waa beddel weyn. Mugga timaha inyar oo gaaban ayaa sidoo kale lagu talin karaa, maxaa yeelay waxay samayn doontaa saamayntaas indhaha ee timaha badan leh.
Gaar ahaan markaan ka hadlayno timaha gaagaaban, tani waa mid ka mid ah xalka ugu fiican. Waa mid ka mid ah xalalka deg -degga ah ee nooga taga natiijo aad u muhiim ah. Waxaan dhihi karnaa taas Waa nooc budo ah oo laga sameeyay keratin oo waliba ku dhegi doonta, markaa way fududahay in la meeleeyo. Waa run inay mar walba jiri doonaan alaab hagaajinaysa, sida buufinta, taas oo hubin doonta joogtaynta timaha, gaar ahaan haddii ay xoogaa dabayl leedahay ama aad rabto inaad sii dheeraato. Waxaa fiican inaad la tashato takhasusle maxaa yeelay haddii aad si joogto ah u isticmaasho, waxay ku siin kartaa timahaaga dufanka leh. Waa xal ku -meelgaar ah oo ku -meel -gaar ah inaan mar kale ku arko timo.
Markaynaan weli lahayn timo lumis si caddaalad ah loo caddeeyay, waxaan had iyo jeer adeegsan karnaa kordhin. Gaar ahaan sababta oo ah waxay ku habboon yihiin inay awoodaan inay qariyaan timaha ugu fiican oo ay siiyaan dhammaystir dabiici ah oo mug leh, sidaan jecel nahay. Sidaad si fiican u ogtahay, waxaa jira dhowr nooc oo fiditaan ah oo aad heli karto. Qaarkood waa la gashan karaa muddo dheer qaarna waa la gashanayaa ama waa la saarayaa nooc timo goyn ah.
Si guud marka loo hadlaayo, waa run in waxa loogu yeero khadadka yaryar loo isticmaalo in taabashada mugga la siiyo qeybta sare ee madaxa. Si aan loo dareemin inay timuhu daadan yihiin. Maaddaama tani ay sidoo kale tahay ujeeddada ikhtiyaar ikhtiyaar u ah mid dabiici ah kan aan ka hadlayno waqtigan. Qarinta bidaarta ka sokow, waa inaan sheegnaa inaad xiran karto toddobaadyo ama bilo, markaa waa mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda weyn xalalka kale. Si aad tan u samayso, waa inaad weydiisaa qolkaaga quruxda ee caadiga ah waxaadna ku raaxaysan doontaa natiijada maxaa yeelay xitaa dabayshu ma awoodo inay la socoto.
Kaliya daqiiqado gaar ah, waxaan haysanaa qurxinta timaha. Tani waxay ka dhigaysaa mid qumman in la qariyo 'taajka' ama xididdada waxoogaa la ballaadhiyo, taas oo noo horseedda inaan isku aragno timo badan ama aan macsalaameynno bidaarta. Maanta waxaan haynaa dhowr ikhtiyaar, laga soo bilaabo kuwa lagu dabaqay isbuunyo qoyan sida haddii ay ahayd qurxinta wajiga, si loo buufiyo dhammaadka. Waxaa jira midabo oo dhan, sidaa darteed ma ahan wax adag inaad doorato taada sidoo kale waxaa lagu iibiyaa dukaamada waaweyn, oo ay weheliyaan midabyo. Waa kuwee ikhtiyaarka aad dooran lahayd?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Talooyin wax ku ool ah oo lagu qariyo bidaarta oo ay tahay inaad ogaato